Everything posted by wanleweyn
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Business Administration & Accountancy 19 Jun 2017
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Business Administration & Accountancy 17 Jun 2017
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Business Administration & Accountancy 14 Jun 2017
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Business Administration & Accountancy 10 Jun 2017
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Sharia and Law 5 Jun 2017
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Sharia and Law 3 Jun 2017
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Maqaalo 3 Jun 2017
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Maqaalo 25 May 2017
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Business Administration & Accountancy 23 May 2017
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Maqaalo 22 May 2017
Qaabka loo ilaaliyo xuquuqda caruurta
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Business Administration & Accountancy 21 May 2017
Sidee ku noqon kartaa in aad lacag yeelatid adigoo yar
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Business Administration & Accountancy 20 May 2017
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Maqaalo 16 May 2017
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Maqaalo 15 May 2017
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Business Administration & Accountancy 11 May 2017
19 talaabo oo si sax ah loogu guuleysan karo xiriirka ganacsiga:
Xiriirka ganacsiga (bussiness communication)
Waa is dhaafsiga wararka dadka banaanka iyo gudaha organization ka waa muhiim in aad la wadaagtid information dadka banaanka ka ah shirkadaada waayo hadii aad dadka banaanka ka ah shirkadda la sheekaysanin oo aadan xog wareysanin shirkadda ma samayn karto kobac dhaqaale.
Dadka banaanka ah shirkadda way dhaliilo karaan shirkadda wayna amaan karaan laakin adiga kaliya ha filan in shirkadda la amaano qofka dhaliisha kuu sheegay laftisa waa uu kuu fiicanyahay dadka marka aad la sheekeystid wax badan ayaad ogaan kartaa haku koobnaanin uun shirkadda gudaheeda waa in uu sameeyaa company ga xog wareysi sidoo kale waa in uu sameeyaa xog aruurin dadka banaanka ka ah company ga .
Hadaba baxda aflixi.com waxa uu idinsooo gudbinaayaa 19 talaabo oo si sax ah loogu guuleysan karo xiriirka ganacsiga:
1.Cadeey waxa aad rabtid in aad ka gaartid ganacsigaada
2.Cadey waayo dhageystayaasha,market ka ma yahay mid aad isku hubtid in aad guul ka gaartid.
3.La soco ama ogow dadka aad u adeegeyso.
4.Marka hore fahan dadka u shaqeyn rabto dhaqamadooda.
5.Maxay tahay taatikada aad u adeegsan doontid suuqa.
6.Marna ha iloobin in maskaxdaada waxyaabo badan kuu sheegi doonto laakin ku adkeyso go,aankaada.
7.Luqadooda kula hadal dadka wax ka iibsaneyso.
8.Isticmaal waxa ayaga doorbidaayaan in aad xiriir kula samaysid.
9.Xubin ama laba ka mid ah dhigooda in xiriir la samaysid.
10.Diyaari waqti aad kula hadashid si fool ka fool ah.
11.Diyaari qorsho una samay ama u hirgeli qorshayaasha A,B,C
12.In la koontaroolo qarashaadka banaanka u baxaayo.
13.Samey olole aad ku hormanayso xiriirka ganacsiga.
14.Hadii ay tahay in loogu tago goobtooda waa in loo tagaa waxay ka mid tahay xiriirka ganacsiga.
15.U samey macaamiisha waxyaabo dheeraad ah oo free ah.
16.Samey wax free ah si aad u heshid adiga waxbadan.
17.feedback ga macaamiisha waxay ka mid tahay natiijada shaqada aad u qabatay meesha ay gaarsiiantahay.
18.Dhoola cadey oo farxad ku soo dhaway macaamisha kuu imaanayso.
19.ka qosli sii oo soo dhaweyn weyn u muuji marka uu macaamiilka kuu yimaado.
Waxaa aad muhiim u ah in aad ka dhabayso waxaa ama aad cadeyso waxa aad rabtid in aad gaarto hadii aadan lahay wax yoolka waa ay kugu adag tahay in hirgeliso 18 ka qodob kale.
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Maqaalo 10 May 2017
dadka inta badan waxay dhibsadaan su,aalaha fara badan waayo su,aalaha fara badan inta badan ma jecla su,aalahana waa in noqdaa su,aalo macquul ah lloma baahna su,aalo maalaayacni ah .
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Business Administration & Accountancy 9 May 2017
Muhiimada ay u leedahay technology-yadda goobaha ganacsiga
Technology-yadda muhiiimada ay u leedahay goobaha shaqada waxaa weeye in uu ganacsigasi dhaqso ah ku balaarto iyo in uu noqdo ganacsigaada mid wax ku ool ah ama waxtar leh.
Ganacsiga technology-yadda waa sida in aad soo bandhigtid shirk kaas oo aad kasoo dhigto mid muuqaal leh islamarkaana aad kusoo bandhigtid social media sida face book,youtube ka iyo wixii la mid ah.
Technology-yada waxay samaysaa in uu ganacsigaada noqdo mid aan xaduud lahayn oo wadan to wadan isaga goosho taasina waxay sabab u tahay technology-yada oo aad isticmaasho islamrkaana uu noqdo ganacsigaada mid sameeyo kobac iyo hormar balaaran.
Technology-yada waxay kor u qaadaa waxyaabahaan soo socda.
1.Hormarinta ama hagaajinta xiriirka ganacsiga
Ganacsiga technology-yadda muhiim ayuu u yahay maxaayeelay wuxuu hagaajiyaa xiriirka goobaha shaqada .
Dadka xafiisyada ka shaqeeyo ma ahan kaliya in ay isku koobaan hal technology-yad isticmaalkeeda tusaale telefoonka iyo emails technology-yada intaas waa ay ka balaarantahay.
Techologyyada sidoo kale kale waxay kor u qaadaa xiriirka ka dhaxeeya ganacsadaha iyo macaamiisha iyo dadka share holders ka la ah technology-yadda ganacsiga waxaa loo adeegsan karaan qeybo kala du duwan.
Technolog-yadda ganacsiga waxay si hufnaan ah u hormarisaa goobaha shaqada iyo shaqaalaysiinta shaqaalaha cusub sidoo kale qaabka aad loo maamulo shaqalaha iyo shaqooyiinka ay qabanayaan intaba waa mid u baahan technology-yadda oo hada noqotay mid wax walbo ayada lagu qabto.
Xafiiska loo shaqeeyo technology-yadda wuxuu safe gayreeyaa ama badbaadiyaa waqti aad ku daba geli laheed shaqaalaha qaabka ay shaqada u qabteen iyo waxa aad ka rabtay ma qabteen taasi waxaa kuu sahli kara isticmaalka technology-yadda .
Technology-yadda ee goobta shaqada ayay faaida u tahay aduunka maanta wuxuu noqday hal qaarad amah al tuulo taasina waxaa sabab u ah technology-yadda waayo wadan to wadan ayay ku gaari kartaa waxsoosaarkaada ama ganasigaada magaciisa iyo waxa uu ka shaqeeyo ama soo saaro hadii aysan jiri lahayn technology-yadda maanta jirta ma uusan gaari lahayn ganacsigaada in magaciisa laga barto wadan kale.
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Business Administration & Accountancy 8 May 2017
Kaalinta uu ku leeyahaytechnology-yadd xiriirka ganacsiga
Technology-yada waxay ka mid tahay nolosha cusub oo dhan walbo leh gaar ahaan goobaha shaqada
Halabuurashaada computerska waxay hormariyeen electronic kada computerska wiresleska ku shaqeeya si uu wanaagsanaado xiriirka ganacsiga ee caalamka dhamaan waxay bedel ka yihiin ganacsiga caalamka.
Xiriirka ama isgaarsiinta ganacsiga wuxuu gaar u yahay hormarka weyn ee ganacsiga sababtoo ah xiriir la,aan ma shaqeyn karo ganacsi.
Waxyaabaha fududeeya xiriirka ama isgaarsiinta ganacsiga waa ay fara badan yihiin waxaan ka soo qaadanaynaa qaar ka mid oo lagama maarmaan u ah xiriirka ganacsiga ama isgaarsiinta ganacsiga.
Telefoonka gacanta waa mid ka mid ah hormarka ugu weyn ee xiriirka ganacsiga halkii markii hore ciriiri loogu jiray isticmaalka telefoonka ganacsiga laakin qarniyadii danbe aad ugu soo batay telefoonka gacanka ganacsigiina uu noqday mid hormar sii samaynaayo maadama la helay technology-yadd fududeynaysa in uu ganacsiga hormar samaeeyo.
Shirkaddaha isgaarsiinta ayaa ah technologyadda casriga ah ee sabab u noqoday in uu hormar sameeyo xiriirka ganacsiga shirkaddaha isgaarsiinta ayaa baajiyay safarkii dheeraa halka maanta uu yahay mid fudud islamrkaana waxa adiga aad doonayso si fudud kugu soo gaari karaan .
Iskaan (Image Scanning)
Iskaanka waxaa uu ka mid yahay xiriirka ama isgaarsiinta loo adeegsado ganacsiga waxaa lagu qaadaa sawiradda iyo dukumiintiyadda iyo adeegsiga koobiga intaba.
Hada ma jirto xafiis aan oolin qalabka scan waayo wuxuu ka mid noqday xiriirka ganacsiga loo adeegsado wuxu kuu fududeeyaa waxyaabo badan oo xiriir la leh ganacsigaada
Faaidada uu u leeyahay ganacsiga technology-yadda
Xiriirka technology-yadda ee ganacsiga waa mid kugu xira caalamka ma ahan kaliya technology-yadda telefoonka gacanta internet ka waxaa uu ka mid yahay dhowr ka mid ah ganacsatada isticmaala.
Faaidada isticmaalka technology-yadda ee ganacsiga ayaa looo isticmaalo wadooyiin fara badan tusaale in aad wax ku iibsan karto si online ah ama si toos ah dadkaaas oo waliba kala joogo laba wadan oo kala fog ama goobo kala fog laakin hal wadan wada jooga,sidoo kale faaidadiisa waxaa ka mid ah in aad ku xayaysiisatid badeecooyiinkaada si lagaaga wada daawado ama looga arko badeecooyinka aad iibisid caalamaka oo dhan.
Safe gareynta lacagaha(Financial savings)
faaidada ugu wayn ee hormarka ganacsiga dhanka technology-yadda in uu yahay xiriirka ganacsiga waa keydka dhaqaale ee uu siinaayo ganacsiga yar yar iyo shirkadaha waaweyn .
tani ayaa loo ogolyahay ganacsiga yar yar si fiican ugu tartama urururada waaweyn ee suuqyada caalamiga ah si kastaba ha ahaatee technoloyadda ayaa waxay aad muhiim ugu tahay ganacsiga yar yar iyo waaweyn intaba .
technology-yadda sida marka hore ahaan jirtay iyo manta waxaa u dhexeeya farqi weyn halka markii hore technology-yadda la adeegsado ay aheed qof in la diro oo la yiraahdo meel hebel warbixintaan geeya iyo in warqad qof loo dhiibo iyo in boost la dhigo halka maanta sida awal ahaan jirtay farqi wayn u dhaxeeya oo technology-yadda noocyadeeda kala duwan meel walbo ay ku baahday oo isticmaalkeeda.
Xiriirka technology-yadda ganacsiga waa mid sii kordheyso xawaareheeda ama speedkeeda islmarkaana dadka ganacsiga ku jira aad u fahmaayaan waayadaan danbe tusaale in ay samaystaan oo kale website iyo sidoo kale waxay isticmaalaan software xisaabaadkooda ku xalistaan halka marka hore la isticmaali jiray qalin iyo buug.
Shaqada gaar ah.
Faaidada dheeraadka ee technology-yada ganacsiga u leeyahay waa hormarka xiriirka ganacsiga iyo in lagu hormariyo xirfadlayaasha kuwaas oo u baahan in loo dajiyo xirfadda ay ku shaqeyn lahaayeen loona iibiyo qalabka technologyada ay ku shaqeyn lahaayeen.
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Maqaalo 7 May 2017
Maxaa sameeyaa waqtiga fursadaha aan leeyahay ama firaaqada?
Waqtiga wuxuu ka mid yahay nolosha qofka insaanka waqtiga waxaa wanaagsan in loogu faaideysto sida ugu haboon ma jirto sida saxda ah qofka in uu
leeyahay waqti iska furan ama firaaqo maadaama aan nahay dad muslimiin ah islamarkaana haboon in aan ka faaideysano waqtigeena sida uu alaah uu raali ka yahay hadii uu qofka firaaqo uu yahay waxaa uu uga faaideysan karaa in uu iska cibaadeysto.Waqtiga firaaqada ma ahan mid loogu talo galay raaxo iyo maalaayacni in aad wagtigaaga ku lumisid raaxada waa in aad kaga faaideysataa waqtiga firaaqada waayo waqtiga firaaqada iyo caafimaad waxay ka mid yihiin waxyaabaha la is waydiin doona maalinta qiyaamaha sidaasi waxaa noo sheegay rasuulkeena sharafta badnaa naxariis iyo nabad gelyo korkiisa ha ahaatee.Arimaha aad uga faaideysan karto waqtiga firaaqada waxaa ka mid ah:
1.In aad leedahay marka hore waqti qorsheysan .
2.Waxaa muhiim ah in aad uga faaideysatid dhanka caafimaad.
3.Aqrinta quraanka kariimka.
4.In aad aqoontaada ugu faaideysid dadka kale.
5.In aad uga faaideysatid dhanka nashaadhaadka ama aalamiintada
wanleweyn added a post in a topic waa side loo hor Marin karaa ganacsiga? 6 May 2017
Ganacsi waa organization ama hanaan dhaqaale loo sameeyo wuxuu noqon doonaa qaabka dhaqaalaha loo sameeyo ama uu noqon karaa ganacsiga mid service ama adeeg bixiya sidoo kale wuxuu noqon karaa mid goods ama badeeco bixiya labadaas shey ayuu ka koobanyahay ganacsi.
Ganacsi walbo wuxuu u baahanyahay xoogaa maalgelin ah kaas uu ku filan macaamiisha hadii ay wax kaa iibsadaan si ayagana faaiido ugu helaan .
Ganaci wuxuu noqon karaaa mid hal shakhsi uu si gaar u leeyahay iyo mid shares ganacsi ah
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Maqaalo 4 May 2017
wanleweyn added Ciwaanka Su'aasha in Business Administration & Accountancy 3 May 2017
Xeerarka dahabiga ee waxtarka maamulka
Shirkadd kasta weyn ama yar waxa ay u baahantahay maamul iyo kala danbeyn si ay shaqada u kala socoto ama uu u gaaro company ga hiigsigiisa hadii uu maamulka ka xunyahay companigaas ma noqon doona mid sii waara ama sii jiri dooona company kasta oo hormar gaaray waxaa sababteeda leh maamulka company gaas.
Maamulka wanaagsan waa midka shaqaalihiisa ka warqaba la socda xaaladooda hoose la sheekeysta mararka qaar una sheego shirkadda in ay shirkadooda tahay ayna kusoo kordhiyaan fikrado cusub islamarkaana maamulka u sameeyo dhiira gelin lacageed hadii ay keenaan shaqaalaha fikrad dhaxal gal ah.
Hadaba bahda aflixi.com waxay idin soo gudbianysaa 10 rules oo dahabi ah oo waxtar u leh maamulka.
1.Noqo joogto ah(be consistent)
In la joogteeyo shaqada waxay qeyb ka tahay hormarka shirkadda isla markana la abaalmariyo shaqaalaha oo dhiiragelin loo sameeyo.
2.Diirada saar wax sax ah oo hufan .
Qaabka aad ula samaynayso xiriirka teamka shaqada waa in uu ahaadaa mid wanaagsan islamarkaana ahaadaa mid ku dhisan akhlaaq wanaagsan.
3.Udaji shaqaalaha goal ka ay ku shaqeyn lahaayeen.
Shaqaalaha ma ahan mid isku wado shaqo ay yihiin team kasta department ayuu ka shaqeynaa waxaa muhiim ah qof waliba in uu ogyahay waxa uu ka shaqeynaayo.
4.Noqo maamule lagu dayan karo
Maamulaha waxaa laga rabaa in uu waxbadan ka dhaqan wanaagsanyahay dadka la shaqeyo waayo waa qofka ay ku dayan lahaayeen shaqaalaha waa in ka wanaagsanyahay dhan walbo.
5.Marna ha marin hal wado
Maamulaha waxaa laga rabaa in uusan marin hal wado waayo waa in uu badalaa taatikada hore hadii ay noqon waydo mid waxtar leh .
6.Xasuusnow sida hufan oo macquulka ah.
Waa in ay jirtaa daahfurnaan iyo la xisaabtan shaqaalaha waa muhiim in midaas la uu xasuusnaado maamulaha mar walbo.
7.Dhiiragelin dhamaan fikaradaha.
Waa muhiim in uu aruuriyo maamulaha fikrahada mida guda ah oo shaqaalaha dhexdooda ah iyo mid banaanka ah ee macaamiisha
8.Caawi dadka si ay shaqadooda ugu raaxaystaan.
Caawinta shaqaalaha waxaa ka mid ah in aad u samayso sanadkii halmar oo kale qado sharaf iyo in aad la qaadatid waqti wada sheekaysi iyo kaftan ah aan ahayn maalin shaqo ah waxay ka mid tahay caawinta shaqaalaha shaqalahana waxay u tahay niyad dhis iyo farxad.
9.Ku abaalmari shaqaalaha meel public ah
In shaqaalaha la abaarmariyo ama la gudoonsiiyo shahaadooyiin waxay ka mid tahay maamul wanaaga islamarkaana waxay ka mid tahay in uu sameeyo companiga kobac dhaqaale.
10.Dhageyso ,su,aalo weydii.
In aad dhagaysatid cabashada shaqalaha iyo in aad waysiiso waxa ay tabanaayaan islamarkaana wax uu ka cabanaayo hadii ay tahay wax macquul ah waa in aad wax ka qabataa waxayna ka mid tahay maamulka wanaagsan.